Dowladda oo go’aamisay in la kor dhiyo taageeradda dhaqaale ee koriimada ilmaha | Somaliska
Dowladda oo go’aamisay in la kor dhiyo taageeradda dhaqaale ee koriimada ilmaha
Dowladda dalkaan Iswiidhan iyo xisbigga garabka biddix ee Vänsterparti-ga ayaa ku heshiiyey in la kordhiyo taageearda dhaqaale ee barbaarinta carruurta ama waxa loo yaqaano “underhållsstöd-ka” iyo taaageero xagga guryaha ah la siinayo dadka howl gabka ah ee “Bostadstillägg-ga”.
Haweeneyda lugu magacaabo Ulla Andersson oo u afhayeenka siyaasadda dhaqaalaha ee xisbigga garabka biddix, ayaa sheegtay in diiradda la saaray dadka ugu liita xagga dhaqaalaha. Heshiishkan dhex maray dowladda iyo xisbigga ayaa waxaa uu qeyb ka yahay miisaaniyadda xilligga deyrta ee dowladdu ugu talagashay sanadka soo socda, marka baarlamaanka ansixiyo. Waxaana ku baxaya adduun gaaraya 2.6 bilyan oo lacagta dalkaan ah, waana mid ay sheegeen in loogu talagalay sinnaanta.
Heshiish-kan ayaa waxaa uu sidoo kale ka mid ah in kor loo qaadayo taageeroadda dhaqaale waaladiinta carruurta keligood korsada, waalidka haysta carruurta da’dooda u dhaxayso 11-14 sanno, kuwaas oo loogu kor dhin doono 150 kr, halka misna waalidka haysta carruuraha da’dooda u dhaxayso 15-18 sanno loogu kordhin doono 350 kr bil walba. Lacag kordhintan ayaa bilaaban doonta bilowga sannadka cusub. Ullana waxaa ay carabka ku dhiftay in lacagtani ay faa’ido u yeelan doonto dad badan. Kordhintan dhaqaale ayaa la bilaabaneeysa sanadka soo socda
Dhinaca kale heshiish-ka dowladda iyo xisbigga garabka biddix ayaa waxaa ka mid ah in dadka howlgabka ah la siin doono taageero xagga kiradda guryaha, iyadoo saqafka taageerada dhaqaale ee kirada guryaha laga qaaday 5 000 oo laga dhigayo 5 600 oo kr. Qofka howl-gabka ah balse hela gunnada aasaaska ah ee howl-nimadda ayaa lagu taageeri doonaa kirada guriga 470 kr bil kasta.
Cabsi laga qabo in la xiro xawaaladaha Soomaalida ee Sweden
Hargabka doofaarka oo ku habsaday Sweden
“Cunsuriyada waxaa masuul ka ah soo galootiga”
QUBANAHA TODDOBAADKA: Gabdhaha Hindiya oo labarayo sideey kufsiga iskaga difaaci lahaayeen